Wararka Maanta: Talaado, Sept 20, 2016-Cabsi lasoo daristay Soomaalida Minnesota kadib dhacdadii ninka Soomaaliga ah dadka ku tooriyeeyay
Soomaalida ayaa ka baqanaaya in laga aar goosto maadaama ninka falkaa ku kacay uu ahaa Soomaali. Ninkaa ayaa markii dad badan uu mindiyeeyay waxaa toogtay nin boolis ahaa oo halkaa ayuu ku dhintay.
Si kastaba hoggaamiyeyaasha bulshada ee Soomaalida gobolkaa ayaa ku baaqay in Soomaalida aan la bartilmaansan maadaama Soomaali iyo Muslimiin aysan lahayn dambiileyaasha dambiyada gala oo cid kasta ay noqon karaan!
Ninkaa yaa Sabtidii lasoo dhaafay 10 qof mindi ku dhaawacay ka hor intii aan toogasho lagu dilin.
Ninkaa oo dhallin yaro ahaa ayaa la sheegay inuu wax badan kunoolaa Mareykanka.
Ninkaa ayaa waxaa la oran jiray Daahir Aadan waxaana da'diisa lagu sheegay 20 sano jir.
Wararka ayaa intaa ku daraya inuu ahaa waardiye iyo arday machad wax ka dhigan jiray.
Soomaalida gobolka Minnesota ku nool ayaa laga soo bilaabo 1991 kusoo ququlaayay halkaa dagaalka sokeeye ee ka jira Soomaaliya dartii.
9/20/2016 8:05 AM EST